तिथि मेरो पत्रु » सम्बन्धमा राम्रो सङ्घर्ष जस्तो कुनै कुरा छ?
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: Mar. 22 2020 |4मिनेट पढ्न
तर्क सम्बन्ध लागि राम्रो मानिन्छ तापनि, यस्तो सम्बन्ध राम्रो झगडा रूपमा कुरा रूपमा छ? हो छ, अविश्वसनीय. लड एक जोडी एकअर्कालाई राम्ररी चिन्न सम्बन्धमा बढ्न मदत गर्छ. के यसलाई रोक्न सकिँदैन भन्ने कुरा भएकोले, युगल एकदम लड्न कसरी सिक्नुपर्छ.
झगडा पहिलो स्थानमा सुरु किन एकदम लड्न कसरी अझ महत्त्वपूर्ण थाह भन्दा छ थाह पाएपछि, पनि भएको तर सानातिना झगडे यो मूल्य छैन. तिनीहरूले यो गुमाउन लागेका जस्तै एक साथी महसुस गर्दा समय बाहिर लिएर धेरै महत्त्वपूर्ण छ, यसो छैन देखि टाला सक्ने गम्भीर प्रतिक्रिया को नेतृत्व सक्छ.
साथै, यो अन्य साथी तिनीहरूले सुने भइरहेका महसुस गर्न महत्त्वपूर्ण छ. चिल्ला म्याच छैन, तिनीहरूले केही समाधान मदत कहिल्यै रूपमा, यो सधैं हुन सक्छ जस्तै आकर्षक.
जब कसैको साथी संग लडाई मा, सधैं amicably झगडा समाधान गर्ने प्रयास, बरु जीत लडाई. तथापि, यस किनभने सजिलो भनेजति, नियम को एक जोडे हो, जो, पछि भने, वास्तवमा यो कि झगडा लायक बनाउन सक्छ.
रिस समाउँदै काम छैन; बरु आफ्नो साथी पार आफ्नो रिस राखे
रिस विश्वव्यापी भावना छ, जो दुखाइ अर्थ पनि, दुःख, अप्ठ्यारोमा र पनि पछुतो. यो एक लामो समय पहिले भयो कि एक घटना वा वर्तमान घटना कारण हुन सक्छ. तथापि, अधिकांश मानिसहरू रिस सामना कसरी थाहा छैन.
रिस प्रकाश देख्न गर्नुपर्छ, कसैको साथी मदत गर्छ भनेर एक भावना एक समस्या समाधान संग आएको. त्यसैले, रिस ध्यान अलि धेरै सजिलै तर्क को कारण संग सम्झौता साथै आफ्नो समाधान मदत गर्नेछ.
एक कम झटका दिनु एक नायक बनाउन छैन
तर्क आफ्नो साथी गरेको कमजोरी माथि ल्याउन पक्षमा छैनन्, रहस्य वा विगतमा खण्डन. यो एक कम झटका छ र एक आफ्नै छाला मा पनि असुरक्षित या त छ भनेर देखाउँछ, त्यसैले, आफूलाई राम्रो महसुस गर्न उनीहरूको साझेदार आक्रमण गर्न आवश्यकता महसुस, वा एक सम्बन्ध टुटाउन तर्कको लागि प्रतीक्षा छ जो एक कायर छ.
एक इरादा संग गरेको यस्तो कायरतापूर्ण कार्यहरू सबै लागत मा टाढा बस्नुपर्छ अन्य साथी अझ पीडा कारण. बरु बेल्ट तल कसैले मार भन्दा, साथी शान्तपूर्वक तिनलाई चोट के बाहिर गुनासो गर्नुपर्छ. अब यो कुनै एक नायक बनाउँछ के छ.
चासो व्यक्त गर्न नभुल्नुहोला, प्रशंसा, मूल्यांकन, र सहानुभूति
माथि को कुनै पनि व्यक्त बिना आफ्नो साथी संग झगडा भएको कुनै पनि सही केही गरिरहेको छ. यी धेरै महत्त्वपूर्ण भावनाहरू हुन्, विशेष गरी सम्बन्ध मा मान्छे को लागि, यस्तो व्यक्त यी भावनाहरू युगल सधैं राम्रो झगडे छ सुनिश्चित गर्न हुनेछ.
तिनीहरूले साथी निष्पक्ष उपचार गर्ने अधिकार छ भन्ने थाहा किनभने प्रशंसा कसैको साथी गर्न नमीठो छैन समावेश. कसैले समानुभूति देखाउन, एक अर्को व्यक्तिको दृष्टिकोणबाट परिस्थिति मा हेर्न छ.
चिल्लाओगे नगर्नुहोस्, चिच्याएर, र अपमान
तिनीहरूले मदत तर जब क्रोधित सबै गलत कुरा भन्न सक्दैन जहाँ कसैले अवस्थामा आफूलाई वा भइन् छ, तर तिनीहरू यो गलत छ थाहा, तर तिनीहरूले सोच्न पनि रिसाउँछन्? लड कसैलाई गर्दछ, विशेष गरी अव्यावहारिक लड्न.
यो रिस देखाउँदा अघि आफ्नो समय लिन महत्त्वपूर्ण छ. शब्दहरू बाहिर blurted हुनेछ रूपमा कुरा गर्न पनि हतार नगर्नुहोस् भनेर फिर्ता लिएको कहिल्यै गर्न सक्छन्, कुनै कुरा के. चिच्याहट र बाहिर कसैको फोक्सोमा चिल्ला र अपमानजनक कसैको साथी मात्र एक आवाज को हानि गर्न जान्छ, बच्चाहरु र आसपास को शायद बाँकी जागने.
जीत या सही मा एक हुन एक उद्देश्य संग लड्न नगर्नुहोस्
कसैको साथी संग लड जब, विजेता यति मेहनत प्रयास छैन, साथी यो काम सिर्फ गलत मा एक हुन सक्छ. सही बस हुन त कठिन प्रयास अपुग व्यक्तिहरूलाई भावना देखाउने जान्छ, गलत हुन चाहनुहुन्छ कहिल्यै मानिसहरूलाई दयालु.
झगडा जित्ने उपयोग के छ, तर कसैको साथी गुमाउनुपर्ने? यो यसको लायक छ? एक त उनि आफ्नो साथी प्रभावित छ देख्दा असफल लडाई जीत मा व्यस्त हुनु हुँदैन. यो अवस्था एक सानो झिक्न र आकलन गर्न प्रयास को एक धेरै लिन्छ, एक मतभेद हुन सक्छन् कसरी हेर्न.
रचनात्मक आलोचना दिन नगर्नुहोस्, यो काम छैन!
लड जब, अन्य साथी आलोचना छैन, यो छैन किनकी यो तिनीहरूलाई मदत छ सोच. एक लडाई मा लगे जो कोहीले सामान्य धेरै रिसाउनु छ, र यो बिंदु मा दिइएको कुनै पनि आलोचना पीडा लाग्नसक्छ मतलब छ. यस प्राप्त मात्र कुरा कसैको साथी तिनीहरूले अक्षम्य र अथाह कुरा गरेका छन् जस्तै महसुस गर्न छ.
बरु, यो पनि भविष्य देख्न प्रेम थियो के तिनीहरूलाई बताएर अन्य साथी गर्न गुनासो गर्न उचित छ.
आखिर भने र गरेको छ, एउटा कुरा छल्ले साँचो. लड निष्पक्ष रूपमा यस्तो कुरा छ, जो सम्बन्ध मा मान्छे को लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ. एक तिनीहरूले लडाइँ सुरु गर्न गरेको हुनुपर्छ मात्र के बुझ्न आफ्नो गल्तीबाट सिक्नु छ, तर तिनीहरूले गर्न सक्छन् पनि के भविष्यमा यो राम्रो बनाउन. राम्रो र निष्पक्ष लड कौशल मास्टर सक्षम छ जो कोहीले एक धेरै लामो र सुखी सम्बन्धको आनन्द उठाउन पक्का छ.